गोलन्जोर, २७ असार । सडकमा पहिरो खसेपछि गए रातिदेखि विपी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध भएको छ । गोलन्जोर र सुनकोशी गाउँपालिकामा विपी राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ ।
गए राति गोलन्जोर गाउँपालिका–५ को सोलाभञ्याङ र खनियाखर्कको बीचमा सडकमा माथिबाट पहिरो खसेपछि राजमार्ग अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रहरी उपरीक्षक चक्रबहादुर सिंहले जानकारी दिए । यस्तै सुनकोशी गाउँपालिका–१ कमरेमा पनि पहिरोका कारण विपी राजमार्ग अवरुद्ध भएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिरोका कारण राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि अहिले पहिरो पन्छाउने तयारी भइरहेको छ ।
यसैबीच माथिबाट खसेको पहिरोका कारण गोलन्जोर गाउँपालिकाअन्र्तगत मध्यपहाडी लोकमार्ग पनि अवरुद्ध भएको छ । अवरुद्ध राजमार्ग हटाई सवारी आवागमन सञ्चालन गर्न गाउँपालिका अध्यक्षसँग समन्वय भइरहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख विष्णु बस्नेतले जानकारी दिए । बिहानको समय भएकाले अहिले थोरै सङ्ख्यामा मात्र सवारी जाममा परेको उनको भनाइ छ । आवश्यक समन्वय गरी डोजर ल्याएर पहिरो पन्छाउने उनको भनाइ छ ।
गोलन्जोर गाउँपालिकाले साइकल जोन भन्दै राजमार्गभन्दा माथि डोजर चलाएर सडक खनेपछि पटक–पटक राजमार्ग अवरुद्ध हुँदै आएको छ । सामान्य वर्षातमा समेत माथिबाट लेदो खस्दा राजमार्ग अवरुद्ध हुने गरेको छ । राजमार्गभन्दा माथि जथाभावी खनिएका ग्रामीण सडकका कारण पानी पर्ने बित्तिकै अवरुद्ध हुने गरेका छन् । राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा गन्तव्यमा हिँडेका यात्रु बीचमै अलपत्र परेका छन् ।
सिन्धुलीमा लगातार वर्षा भइरहेको र अहिलेसम्म कहीँकतै अप्रिय घटना नघटेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ । जिल्लाको मरिण, कमला तथा चदाह क्षेत्रका बासिन्दालाई खोला तथा नदी क्षेत्रमा जाँदा सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको छ ।
‘टोर्नाडोको क्षति कम गर्न पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ’
कँडेलको चुनौती- म भारतीय नागरिक भएको पुष्टि गर
१० करोड क्षतिपूर्ति माग्दै अदालत पुगिन् शाह
चावहिलमा पुरानो घर भत्काउँदा घाइते भएका तामाङको मृत्यु
मानव तस्करीको आरोपमा भारतबाट एक नेपाली पक्राउ
विद्यालयको छानो खस्दा ३ दर्जनभन्दा बढी विद्यार्थी घाइते
राष्ट्रपति भण्डारी ग्वाङ्झाउमा
कतारको श्रम कानूनमा व्यापक सुधार, कहिलेबाट हुन्छ कार्यान्वयन ?
राजनीतिमा अपराधीकरण र नेतृत्वमा भ्रष्टिकरण अक्ष्यम्य : मन्त्री बाँस्कोटा
नेकपाका नेताहरुमाथि चन्द समूहको आक्रमण
कास्की २ उपनिर्वाचनमा साझा पार्टीबाट रजनी केसी उम्मेद्वार
नेपाली सेनाको भर्ना छनोट प्रक्रियामा अनियमितता गर्नेलाई कारवाही
बलात्कार र हत्या गरी फरार रहेका गौतमलाई अमेरिकाबाट नेपाल ल्याइयो
जनकपुरमा गोली चल्यो
व्यक्तिगत घटना दर्ता अनलाईनबाटै
एशियाकै ठूलो शिला शालिग्राम संरक्षण अभावमा जीर्ण
कस्तुरीको बीनासहित दुई जना भारतीय पक्राउ
तीन वर्षदेखि इलाका प्रशासन बन्द
अविवाहित महिलाले भत्ता पाउने
अवैधरुपमा लगिदै गरेका ४० राँगा नियन्त्रणमा
काठमाडौं, ७ कात्तिक । बलात्कारपछि हत्या गरेको अभियोगमा दोषी ठहरिएका एक नेपालीलाई अमेरिकाले पक्राउ गरेर नेपाल प्रहरीलाई...
ओलीले महरालाई दोषेको एमसीसी के हो ?
साझापोस्ट/काठमाडौं, ६ कात्तिक । गत शनिवार एक राष्ट्रिय दैनिकलाई अन्तर्वार्ता दिंदै सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री...
काठमाडौँ, ६ असोज । अस्पतालको लापरबाहीले असामान्य बच्चा जन्मिएको भन्दै पूर्व सांसद गायत्री शाह ललितपुर जिल्ला अदालत पुगेकी...
भाइटीकाको भोलिपल्ट पनि सार्वजनिक विदा
काठमाडौं, ६ कात्तिक । सरकारले कात्तिक १३ गते सार्वजनिक विदा दिने भएको छ । नेवार समुदायले मनाउने भाइटीकाका दिन कात्तिक १३ गते...
अक्षयले धेरै पैसा डिमाण्ड गरेपछि हातबाट फुत्किए दुई फिल्म
काठमाडौँ, ६ कात्तिक । बलिउडका चर्चित अभिनेता हुन् अक्षय कुमार । पछिल्लो समय उनी आफैँ नै फिल्म उद्योग हुन् । उनले निर्माण गरेका...
मानव तस्करीको विभत्स दृश्य: ट्रकभित्र ३९ जनाको शव भेटियो, ड्राइभर पक्राउ
एजेन्सी, ६ कात्तिक । बुल्गेरियाबाट बेलायत प्रवेश गरेको एक मालबाहक ट्रक(लरी) भित्र ३९ जनाको शव फेला परेको छ । प्रहरीले बुधबार...
बिगत २६ वर्षदेखि आमिर र सन्नी देवलबीच बोलीचाली छैन
काठमाडौँ, ६ कात्तिक । बलिउडका चर्चित अभिनेता हुन् आमिर खान र सन्नी देवल । उनीहरुबीच बोलीचाली छैन । उनीहरुको सम्बन्ध कसरी र...